राप्रपामा गयो प'हिरो, यी शक्तिशाली नेता एमालेमा प्रवेश !
राप्रपामा गयो प’हिरो, यी शक्तिशाली नेता एमालेमा प्रवेश !
काठमाडौं। राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे नेकपा (एमाले) प्रवेश गर्ने भएका छन् । यसअघि चितवनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पराजित भएका पाण्डे आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरे एमाले प्रवेश गर्न लागेका हुन् ।